Umaka: ama-backlinks | Martech Zone
Nsuku zonke ibhokisi lami lokungenayo ligcwala izinkampani zogaxekile ze-SEO ezinxusa ukubeka izixhumanisi kokuqukethwe kwami. Kungukusakazwa okungapheli kwezicelo futhi kuyangicasula impela. Nakhu ukuthi i-imeyili ivame ukuhamba… Sawubona Martech Zone, Ngibonile ukuthi ubhale lo mbhalo omangalisayo ku- [igama elingukhiye]. Sibhale nodaba oluningiliziwe ngalokhu. Ngicabanga ukuthi kungangeza okuhle ku-athikili yakho. Ngicela ungazise uma ukhona
ULwesine, April 16, 2020 ULwesine, April 16, 2020 U-Oscar Florea
Abakhangisi bedijithali bathembele ekwakhiweni kwesixhumanisi njengecebo elibalulekile ekusebenziseni izinjini (i-SEO) ukukhulisa amazinga abo ekhasi emakhasini emiphumela yenjini yokusesha (SERPs). Ngabamakethi abasebenzela ukuthola ama-backlinks nokwenza ngcono ithrafikhi yesayithi, ukukhiqiza ukuhola, nokufeza ezinye izinhloso, bafundile ukubheka izindlela eziningi ezithandwayo ebhokisini labo lamathuluzi. Yini i-Backlink? Isixhumanisi esingemuva siyisixhumanisi esichofozekayo sisuka kusayithi eyodwa siye kwesakho. Izinjini zokusesha ezifana
NgoLwesithathu, Januwari 22, 2020 NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 Douglas Karr
Izinkampani ze-SEO ziyaqhubeka nokuzama ukukhohlisa imiphumela yenjini yokusesha… ngeke ime. UMat Cutts weGoogle ubhale iposi elihle, Ukubola nokuwa kwezivakashi kubhuloga kwe-SEO kufaka ividiyo esiteji sakhe ekubhlogweni kwezivakashi futhi uMat unikeza lokhu njengesihloko sakhe: Ngifuna nje ukugqamisa ukuthi inqwaba yekhwalithi ephansi noma ugaxekile amasayithi anamathele ku- "guest blogging" njengecebo lawo lokwakha izixhumanisi, futhi sibona ifayili le-